Wednesday, 10 April 2019 16:43
ဥရောပ ကားကြီးတွေရဲ့ instrument cluster မှာတွေ့ရတဲ့ အခေါ်ဝေါ်များ နှင့် သင်္ကေတအချို့
ဥရောပ ကားကြီးတွေရဲ့ instrument cluster မှာတွေ့ရတဲ့ အခေါ်ဝေါ်များ နှင့် သင်္ကေတအချို့ ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Wednesday, 10 April 2019 13:44
ဓာတ်ဆီတိုင်ကီကို ပြည့်လျှံသည်အထိ မည်သည့်အခါမျှ မဖြည့်မိပါစေနှင့်
မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ သင့်ကားဆီတိုင်ကီကို ပြည့်လျှံသည်အထိဓာတ်ဆီ မဖြည့်မိပါစေနှင့်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်များတွင် သွားရောက်ဖြည့်ရာတွင်လည်း ပန့်ကိုင်ဝန်ထမ်းကို တိုင်ကီပြွန်(အဖုံးဖွင့်လျှင်ဖွင့်ချင်း တွေ့ရသောအ၀ကျယ်ပိုက်)ကြီးမှ လေသံကြားလျှင် ဆီဆက်မထည့်ဘဲ ရပ်ခိုင်းရန် ဓာတ်ဆီဖြည့်တိုင်း မှာကြားပါ၊
Wednesday, 10 April 2019 10:49
အုံနာဘုတ်နဲ့ပက်သတ်ရင် မူရင်းနဲ့မိတ္တူဘယ်ဟာက အနိုင်ရမလဲ
လက်ရှိကားဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ အုံနာဘုတ်ပျောက်အသစ်လျှောက်၊ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ မသမာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး မူရင်းအုံနာဘုတ်ပိုင်ရှင်နဲ့ မိတ္တူတို့အကြားဘယ်ကမှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုပြီးအွန်လိုင်းမှာ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။
Wednesday, 10 April 2019 09:46
ရန်ကုန်လိုင်စင် (YGN)၊ မန္တလေးလိုင်စင် (MDY)၊ နေပြည်တော်လိုင်စင် (NPT)၊ စစ်ကိုင်းလိုင်စင် (SGG) စတဲ့ ကားအသီးသီးဟာ လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်လို့ သက်တမ်းတိုးကြတဲ့အခါ ရန်ကုန်လိုင်စင်ဟာလည်း ရန်ကုန်ထိကားယူသွားစရာမလို၊ မန္တလေးလိုင်စင်ဆိုရင်လည်း မန္တလေးကိုကားယူသွားစရာမလိုဘဲ မိမိလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ကညနမှာ တခြမ်းစစ် ခရီးလွန်စစ်ခြင်းဖြင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာကြောင့် မူလရုံးထိကားသယ်ဆောင်သက်တမ်းတိုးရတဲ့ဒုက္ခကို ကင်းဝေးစေပါတယ်။
Tuesday, 09 April 2019 17:05
Hybrid ချင်းအတူတူ ဘာလို့ Honda Civic မှာပဲ IMA အဖြစ်များတာလဲ
အခုလက်ရှိ Honda Civic ဝယ်ရင် IMA ကင်းလား,Computer ထိုးစစ်လို့ရလား? အဲ့လိုတွေဘာကြောင့်မေးရလဲ? IMA ဆိုတာက Integraded Motor Assist ပါ။
Tuesday, 09 April 2019 15:54
ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထက် အသုံးများသည်။ ဒီဇယ် အင်ဂျင်သည်ပါဝါစွမ်းအား ကောင်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ် နည်းပါးခြင်း၊ အကြမ်းခံ၍ ကြာရှည်အသုံးခံခြင်း စသော အားသာချက်များ ရှိသည်။
Tuesday, 09 April 2019 13:55
ကားဝှီးတက် ပျောက်ဆုံးမှုအတွက် ပြန်လျှောက်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ
ယာဉ်သက်သေခံ လက်မှတ်(အရပ်ခေါ် ဝှီးတက်ပေါ့) အပျောက်လျှောက်ရင် ကျတော်တို့က ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထားသူရဲ့ မှတ်ပုံတင်မူရင်းကို တောင်းပါတယ်။
Monday, 08 April 2019 14:10
အရင်က (၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း) ထုတ်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုနောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ချို့ယွင်းလာပြီဆိုရင် အရင်ဆုံး အချက်ပြမီးတွေကနေ သတိပေးလေ့ရှိပါတယ်။(အချို့သော နေရာများပြလေ့မရှိ)။
Monday, 08 April 2019 10:15
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(၁၁)မျိုးကို ဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင် ဒီလောက်ကုန်ပါမယ်
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(၁၁)မျိုးကို အသစ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သက်တမ်းတိုး(နှစ်လဲ)တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပျောက်လို့(မိတ္ထူ)ပြန်လျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နယ်ပြောင်း(နရပ)တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုတိုင်း(အာမခံကြေးမပါ) ဖေါ်ပြပါပုံပါဇယားအတိုင်းကုန်ကျပါမည်။
Friday, 05 April 2019 18:28
သတင်းစာမှာ အခုလိုတရားဝင်မပါလာခင်က FB မှာတော့လိုက်ထရက်ယာဉ်တစ်မျိုးတည်းလို့ပဲ သတင်းပျံနေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့တိတိကျကျ Expressယာဉ်များ၊ Mini Bus များ၊ ဘုရားဖူးယာဉ်များနှင့် Telematic စနစ် တပ်ဆင်ထားသောယာဉ်များရယ်လို့ပါရှိပါတယ်။
Friday, 05 April 2019 16:41
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ နှင့် ၃၀၀ ကြားရွေးချယ်သင့်သည့် Volkswagen Polo
ဂျာမနီ Brand ဖြစ်တဲ့ Volkswagen Polo ကို တင်သွင်းမှုများလာတဲ့အတွက် အပိုပစ္စည်း ရှာရလွယ်ကူလာပြီး ဈေးတန်းဝင်တဲ့ကား ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ဂျပန်ညာမောင်း နံပါတ်ထွက်ပြီးသားကားတွေ ဈေးမြင့်တက်တဲ့အချိန်မှာ ဝယ်ယူသင့်တဲ့ ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
Wednesday, 03 April 2019 13:55
မီးခိုးအရောင်များမှပြောသော ကား၏ ရောဂါလက္ခဏာများ
သင့်ကားကနေ မီးခိုး ဘာအရောင်ထွက်နေလဲ၊ ဘယ်မီးခိုးအရောင်က သင့်ကား ဘာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
Wednesday, 03 April 2019 10:06
Wednesday, 03 April 2019 09:35
သင်ကိုင်ထားတဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင် ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ ဒီလိုလေးပြန်လျှောက် ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ပြန်ရတယ်။
(Car Key Remote Systems)
Anawrahta Maung Maung Khin
Shwe Hsu Tun
(Motorcycle Spare Parts)